I-JMR BlueStor SHARE iNethiwekhi yokuGcina iSeva yokuSebenzisana yeHD ukuya kwi-4K yoKwabiwa kwezicelo zoGcino ngokuSebenza | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-JMR i-BlueStor SHARE Yesevisi Yokugcina Inethiwekhi Yobambiswano kwi-HD ukuya kwi-4K Izicelo zoKhuseleko eziHlanganisiweyo zoHlelo lokuSebenza.
I-JMR i-BlueStor SHARE Yesevisi Yokugcina Inethiwekhi Yobambiswano kwi-HD ukuya kwi-4K Izicelo zoKhuseleko eziHlanganisiweyo zoHlelo lokuSebenza.
UGordon Moore, kwi-1965, wabikezela ukuba inani labathengi kwi-IC okanye kwi-chip liphindwe kabini kwiminyaka emibini, okanye ukuba ubunzima be-IC bunokwandiswa ngokukhawuleza ngexabiso elifanelekileyo malunga neminyaka emibini. Ngokufanayo kwi-1950s, i-IBM ibonise i-disk drive yokuqala yokuqala eyayibukhulu befriji ezimbini kunye ne-50 "x24" zeenqwelo zokunika i-3.75MB yokugcina idatha; kunye ne-1956 inguqu ehlanganisiweyo kwi-RAMAC 305 inkqubo ye-5MB yedatha kwi-$ 10k nganye nge-MB ($ 10 nge-MB). Xa kuthelekiswa, idrayivu ye-8TB yanamhlanje ibiza i-$ 0.038 nge-GB ($ 3.8 x 10-8 nganye kwi-MB) kwaye uya kwi-100TB kwi-3.5. ifom ye2025, ngokwe-ASTC, ekhula kwi-30% CAGR. Jonga ishati engezantsi.
Ukuqwalasela ukuveliswa kweteknoloji yokugcinwa kwimizuzu engama-50 edlulileyo, inzuzo enye yokunceda ekuthengisweni kwempahla rhoqo kunye neendleko zeenkqubo kunye nokuqhubela phambili kwiinkqubo zokusebenza zesofthiwe yokugcina isishenxiselwano esivela kumthengisi onelungelo lokuthengisa, olwabiwo oluthile kunye nexabiso elibi. izisombululo zexesha elidlulileyo ezithatyathwa yizinto eziphathekayo zezinto eziphathekayo kunye nokusebenza okunyukayo, ukusebenza kunye nobuchwepheshe be-homogeneous kwiindawo ezikhuphisanayo. Ukuzihlukanisa, abenzi abaninzi abancinci bezinto zokugcina isitoreji eziphakathi badibanise ixabiso kwiinkqubo zabo kuquka ukukhethwa kwee-HDD ze-SAS / SATA, ii-SSD kunye ne-dribby hybrid, i-ASIC eyenziwe ngokwezifiso, i-backplanes ezingenamsebenzi kunye nee-NIC ezizodwa zokuphucula ukusebenza nokusabalalisa; Ubume obuhle kunye neentlobo zeengqungquthela zokutshatyalaliswa kombane kunye nokulawulwa komsindo; ii-RAID zombini, ukunikezelwa kwamandla okutshisayo okutshisayo kunye nokuhlola ngaphandle kwezandla kunye nokuxilonga ukuphucula ukuthembeka kunye ne-MTBF, kunye neenkqubo eziphambili ze-software ze-OEM zokuphucula ukusebenza. Isiphumo yindlela yokugcina yokubonelela ngenqanaba lokusebenza, ukuthembeka kunye nokusebenza kwiqhezu leendleko zabathengisi abaphezulu.
Enye inkampani enjalo enika inkqubo enjalo yaseCalifornia JMR Electronics, Inc. kunye nexabiso labo elinguxabiso elihlawulelwayo BlueStorTM YABENZISA I-Server Storage Network Yesevisi enikwe i-OSNAS software yesofthiwe.
Ijoliswe kwi-small-to-medium pro-av, ukusasazwa / ikhebula /Sathelethi, imidiya yokusasaza kunye nemveliso / imveliso yokuthumela imveliso eneemfuno ze-Ethernet okanye i-Fiber esekelwe kwi-high-speed applications (isitoreji esabelwe) efuna ukukhutshwa okuphezulu, i-server yeBlueStor SHARE ifanelekile kwifayile ekhonzayo, i-imeyile / i-web server / ukusasazwa kweendaba, idijithali A / V (iVidiyo / iVidiyo) ukugcinwa kwemisebenzi yokusebenza, iqoqo le-HA kunye nezicelo zokugcina ezigcinwayo. Ixabiso elingaphantsi kwamahlanu ukuya ngaphantsi kwamanye ama-intla-class-offerings, itholakala kwi-160TB yenkcazelo yedatha kwi-3U edibeneyo kwaye inokulinganisa ngaphaya kwe-1 PB eneyunithi enye yentloko. Ilayisenisi yesofthiwe esinikwe ekuqaleni ivumela amandla okugcina okungenamkhawulo ngaphandle kwemfuneko yokuphucula ilayisenisi.
Umncedisi unikezela ubuninzi beempawu zoshishino eziquka i-6Gb / s SAS / SATA i-disk drive bays, ezine (N + 1 ezimiselweyo) ezisezantsi ezilawulwa yi-thermostatic-high speed velocity cooling fans, i-620W (N + 1) I-24-port ye-6GB yangaphakathi i-SAS, i-two (ngokuzikhethela) i-PCI3.0 SAS i-hardware i-RAID, abaphathi be-RAIC, ukuya kwii-NIC ze-1Gb / s ze-NIC okanye ii-interfaces ze-Intanethi ze-Double / Quad 10GbE ezikhethiweyo. ibhodi yebhodi ephezulu yokusebenza kunye ne-3.5 GHz-core core Intel I-CPX i7 okanye i-8-core Xeon CPUs, kunye IntelZ97 Express chipset.
Isitoreji esinamandla seBlueStor SHARE isofthiwe ye-euroNAS inempawu ezininzi, ezenza kube mnandi kubo bobabini abaqeqeshi be-IT nabaqeqeshi be-A / V, kuquka i-AFP, i-NFS, i-SMB / CIFS kunye neFTP inkxaso. ejoliswe kwi-iSCSI ekujoliswe kuyo kunye nenkxaso ye-VMware ESX, iMicrosoft Hyper-V, iCitrix XEN; kunye ne-Fiber Channel ekujoliswe kuyo kunye nenkxaso ye-VMware ESX, i-Microsoft Hyper-V, i-Citrix XEN; ukuphindaphinda okungapheliyo okuphindaphinda ukugcinwa kwesinye iseva; ukuphindaphinda okutshintshileyo okuchazwa ngokukhawuleza kwedatha kunye nokuthembeka; kunye neengongoma-nge-time snapshots zokufumana iifayile kwimeko yangaphambili. Ngokukodwa, isofthiwe iquka:
I-euroNAS yokuThatha iiNkqubo zeSoftware
I-OS agnostic ye-Hardware
Abenzi bokugcinwa kwelifa bavame ukusebenzisa i-hardware yecala kunye nenkqubo yokusebenza eza kusebenza kuphela kwi-hardware echaphazelekayo. Nge-euroNAS, iiseva eziqhelekileyo ziyakwenza izixazululo ezinamandla zokugcina kodwa ngeqhekeza leendleko.
i-euroNAS iguquguquka kwaye isekela ezininzi iinkonzo kwiimarike kodwa ayifuni i-hardware ensimbi. Ingasetyenziselwa njengesixhobo sokuSebenza esiKhuselekileyo esinokubiza kwiindawo ezizenzekelayo ukuze abasebenzisi bangasebenzisa ukugcinwa kwabo okukhoyo ukuze bakhe into enkulu.
I-euroNAS isekela bonke abathengi abakhulu kunye neenkqubo zabo zokuzalwa. Isebenza ne-Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10, 2003 / 2008 / 2012, Hyper-V), i-VMware ESX / ESXi, i-Apple MAC OS X incl. XSAN, StorNext, iCitrix XenServer 5.x / 6.x, iLinux.
Umncedisi angaqwalaselwa njengelungu leDesign Domain Domain, abasebenzisi kunye namaphasiwedi baya kulandelelana ngokuzenzekelayo nge-domain. Abalawuli beNkqubo bangakwazi ukulawula lula abasebenzisi babo kunye nokuqinisekiswa.
Inkxaso yeSMB / CIFS
Imveliso ye-euroNAS inkxaso yokufikelela izabelo nge-SMB (i-Server Message Block versions 1, 2 kunye ne-3) / i-CIFS (i-Intanethi ye-Intanethi yeFayile ye-Intanethi).
Inkxaso ye-AFP incl. Ukukhanya
Imveliso ye-euroNAS inkxaso yokufikelela izabelo nge-AFP (iProduction Filing Protocol) kubaxhasi be-Apple. Ukongezelela, i-euroNAS Premium iphinde isekele i-Spotlight, isici esiphezulu, esenza ukuba uphendule ngokukhawuleza kokuqukethwe. Ukuqwalaselwa komxholo kwenziwa kwiseva, okuphucula ukusebenza kunye nokunciphisa umthwalo weMAC Clients.
Iimveliso ze-euroNAS zingasetyenziselwa ukufikelela kwedatha ngeNFS (iProsoft File System Protocol) kwiinkampani ze Linux / Unix
I-iSCSI yi-IP-based-based networking protocol, evumela ukudalwa kweedkski ezibonakalayo (iithagethi ze-iSCSI) kwiseva engasetyenziselwa ukwenziwa kwemigangatho, ukugcinwa ngokubelwe ngokunye. iithagethi. Iimveliso ze-euroNAS zixhasa i-iSCSI, i-VAAI (vStorage API ye-Integrated Array) ukukhawulezisa i-VMWare ne-CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) yokukhusela ukhuseleko lomnatha.
Support Fiber Channel
I-Fiber Channel (FC) yinkampani yezobuchwepheshe obugcinwe ngokukhawuleza. Nge-euroNAS, abasebenzisi bangakha isilwanyana seC FC isitoreji esiza kunika i-I / O ishishini kunye nekhawulezi. Ixhasa ukukhawuleza kwe-16 Gb / s. Nge-SAN Cluster, inokuzibuyisa idatha yesibonelelo esebenzisa inkampani yeprojekthi yeC FC.
I-euroNAS Premium kunye ne-HA Cluster inokuqwalaselwa kwiCache Tiering. Iphucula ukusebenza komncedisi wesitoreji ngokuhamba ngokukhawuleza kwedata esetyenziswayo kwisixhobo esheshayo, esincinci njengesi-SSD. Lo mncedisi wokugcinwa kwe-hybride uya kunika ukuphakama kwe-I / O kunye namandla amakhulu ngeli xesha. Iza kuhlalutya ngokuzenzekelayo ukudluliswa kwedatha engenayo kwaye iqhube iibhloko ezisebenzise kaninzi kwiidiski ezikhawulezayo (SSD). Sekuninzi iseva isebenzisekile, iya kuba yinkqubela ngakumbi.
Ukubonelela okwenziwe ngu-euroNAS isici sokuqala se-intanethi ekudalweni kwemilinganiselo ebonakalayo kunye neendawo ezidibeneyo ngaphezu komthamo ngokomzimba (ngokusekelwe kwanele-ngokwaneleyo kunye nexesha elifanelekileyo), apho zidalwe khona. Inzuzo kule nto isebenzisekayo ngokubanzi indawo ekhoyo kunye nomzekelo onokuguquguquka, apho izibonelelo zinganwetshwa xa kuyimfuneko.
I-Mirror yeService nge-Ethernet
I-euroNAS HAI Cluster inika ukufumaneka okuphezulu ngexesha langempela, ukuphindaphinda kwedatha kunye nokuvumelanisa phakathi kwamaseva amabili afakelwe. Zombini iiseva ziqulethe idatha efana neyokulondolozwa kwemali, ngoko ke ukuba kwenzeka ukuba enye ihluleke, abathengi banokufikelela kwiidatha zabo. Kwakhona, kunokwenzeka ukuchaza ukuba zeziphi izixhobo kufuneka ziqhutywe kuyo iseva, eyenza ukusetyenziswa okusebenzayo kwamaseva kunye nokusebenza okuphezulu ngexesha elinye. Ukongeza, i-HA iqela isebenzisa uluhlu lweenkonzo ezifana neSMB / CIFS / AFP, ukuqinisekiswa kwe-Active Directory (kwi-CIFS ne-AFP), i-NFS kunye ne-iSCSI.
I-Mirror yeServy ngeFiber Channel
I-euroNAS SAN Cluster isekelwe kwi-teknoloji yesiteshi se-Fiber ekudaleni iqoqo eliphezulu lokufumaneka, kunye nokusebenza kwempompo efanelekileyo yokugcina inethiwekhi kunye ne-digital A / V workflows. I-SAN Cluster isebenzisa i-euroNAS I-SMART SAN MIRROR (eSSM) iteknoloji, ebonisa ukuphindaphinda kwe-real-time server replication for redundancy.
Iifoto zivumela umsebenzisi ukuba enze ikopi enye okanye ehleliweyo ye-share / iSCSI / FC ejoliswe kwinqanaba elithile ngexesha. I-snapshot ibandakanya ukucwangcisa kunye ne disk yedata, xa kufuneka, ingabuyiselwa kwimeko yesabelo kwinqanaba xa i-snapshot yenziwe.
Ukuvumelanisa kwiseva yinto ephakamileyo, enokudlulisa idatha kwintanethi yendawo okanye ngaphaya kwemida emide ngokuthembeka kwaye ngokukhawuleza. Ngexesha lokuvumelanisa kwedatha, xa ukopisha iifayile ezinkulu, utshintshe kuphela ii -tes kulezo fayile zihanjiswe, okwandisa ukusebenza ngokubanzi kwaye igcina i-bandwidth. Isici seSpapshot Replication sikwenza ukuba ukopize "umxholo oqingqiweyo" -ku kuphucula ukuhambisana kwedatha xa ukopisha idatha ephilayo. Imisebenzi yokuvumelanisa ingahlelwa ukuba isebenze imihla ngemihla okanye ngeyure.
Le nxalenye isetyenziselwa ukwenza isipele kwamanye amaseva we-NAS angaphandle kwiseva ye-euroNAS.
Iimveliso ze-euroNAS zixhasa ii-RAID ze-hardware kunye nabalawuli abahlukahlukeneyo abavelisi abahlukeneyo ukwenzela ukuqhuba ngcono i-RAID. Iiseva ze-euroNAS zinika izixhobo zokulawula i-RAID ezihlanganisiweyo ngaphakathi kwiinkcukacha ze-imeyile kunye neenkxaso ze-imeyile. Kwakhona kubandakanye ne-LSI Agent Management Agent ukuze kube lula ukulawula.
I-Software RAID inkxaso
Isisombululo esiphumeleleyo soluhlu lwe-redundancy kunye nenkxaso yazo zonke iindawo ezinkulu ze-RAID kuquka i-RAID 0, i-1, i-10, i5, i-6. Kwakhona isekela ukwandiswa kwamandla kwikhompyutheni, i-Hotspare Drive kunye nesaziso se-imeyile xa kwenzeka ukungaphumeleli kwediski.
APC Uxhasano lweeNkonzo
I-euroNAS Server izakuvala ngokuzenzekelayo iseva kwibhetri ephantsi. Isaziso esheshayo nge-imeyile sithunyelwa kwimeko yokungaphumeleli kwamandla. Izixhobo ze-UPS kunye ne-USB APC nazo ziyaxhaswa.
Izixhobo zokunxibelelana zingasebenziselwa ukulungiswa kwe-failover redundancy okanye ukunyuka kokuphuma.
I-euroNAS izothumela imiyalezo ye-imeyile kwimeko ye diski / ukuhluleka kwamandla, iingxelo zokuvumelanisa, i-UPS okanye izaziso zeqoqo.
Ukusetyenziswa kwezixhobo zokusebenza
Kwaye kwaqhagamshelana nezikhundla ezimbini, La Grange Post kwaye Cucumber & Company on both sides of the U.S. to see why they purchased JMR’s BlueStor SHARE and how they were using the system. Southern California based La Grange Post wayekhethile umncedisi wesitoreji senkampani njengendawo yabo yokugcina indawo, ngaphezu kwongeza ukwandiswa kwe-JBOD ye-200TB amandla okukhulisa ukukhula kwangomso.
La Grange Post, evule iingcango zayo kwi-2008, inika iinkampani eziqulathekileyo kunye nabavelisi ngeenkonzo ezahlukeneyo ezivela kwiinguqulelo zedijithali kunye nokukhutshwa, ukulungiswa kwevidiyo / ukulalelwa kombala kunye nokulungiswa kombala, ukubuyiswa kwemisindo / yevidiyo, amathrekhi angaphandle ahambelana kunye nokuhanjiswa kwefilimu ukuya kwividiyo . Isibonelelo kunye nabasebenzi bee-centric zabathengi, abanamava ekusasazeni, kwiingcingo, kwi-AV kunye ne-web based based programming, kwakhona i-4K off-line kunye ne-line-bay editing bays, ikhamera epheleleyo kunye neepakethi ezikhanyayo, ukuphuhlisa imifanekiso, abaqambi bomculo bokuqala kunye nombuso izakhiwo ezifanelekileyo.
I-JMR ye-BlueStor SHARE kunye ne-10GbE zokunxibelelana kwe-I / O zefiber, ezixhaswa yi-euroNAS OS, isebenza njenge-central drive kunye ne-repository kuwo onke amajelo okuhlela aseLa Grange, esebenzisa iMac kunye AVID iiplatifomu zesofthiwe.
Ngokomnini wesibonelelo se-Ayal Nitzan, "Sichitha ixesha elide sifuna iimpahla kwiimoto ezininzi kwaye sasingakwazi ukubona yonke indawo kwindawo enye okanye iWindows window ngaphambi kokuhlanganisa inkqubo ye-JMR SHARE yokugcina. Imfuno zethu zenkqubo zibandakanya inkqubo yexesha elizayo eya kuba nakho ukusingatha iimfuno zokufunda / ukubhala ukuya kwi-4K emsebenziniflows ukusuka kwiindawo ezininzi zokuhlela, unesiseko esiphezulu sokuthembeka, ukusebenza ngokubanzi, inkxaso ephezulu yabaxumi kunye nexabiso elifanelekileyo. "U
ULa Grange wenza into ebalulekileyo ngenxa yokwenza isigqibo kwiJMR. I-Nitzan eyongeziweyo, "Ngaphandle kwezinga eliphezulu lokusebenza nokulindela, sasifuna inkqubo ekwazi ukuphatha izicelo ezigcinwe ngokubanzi kunye nokuba nelayisenisi ye-software engasihlawulisi ngomlinganiselo wokugcina owongezelelweyo. Sijonge iLaCie, i-OWC, i-Synology, HGST kunye ne-ExaGrid ngaphambi kokuthatha isigqibo kwi-JMR kunye ne-BlueStor SHARE system. Inkqubo yeJMR iqhubekile, idwala elomeleleyo kwaye linokwethenjelwa; inkxaso yabo yabasebenzi bayakwazi kakhulu, kwaye kugxininiswe ngabathengi; kwaye inkqubo ibonakalise ukuba kulula ukuyifaka kunye nokusetyenziswa. Ngaphantsi - ukuphumelela kwabaxhamli bethu ngenxa yokuphucula okukhulu ekusebenzeni kakuhle komsebenzi kunye ne-ROI enkulu ngathi. "
Ngokufanayo, iBekkley, eNtshona Virginia Cucumber & Company usebenzisa le nkampani I-BlueStor SHARE Inethiwekhi Yokugcina Inethiwekhi kunye nomthamo we-160TB njengendawo yokugcina yokugcina yeMac esekelwe kwi-Final Cut Pro ne-After Effects.
Cucumber & Company, which opened its doors in 2003, provides businesses and producers with a variety of services that include video production, web design, multimedia ukuthengisa, kunye noyilo lwezobugcisa kwiNtaba yeZizwe nakwilizwe lonke. Iqela lichaphazela iqela labaxhasi bezakhono ezibandakanya abahlaziyi bevidiyo, abaqhubi bekhamera, abaqhubi bee-pione kunye nabalawuli bee-drone kunye nabaqhubi abahambayo abahambayo abathengi abaxhasi babo beemveliso zentengiso yeevidiyo, kuquka ii-video zokuqeqesha, iividiyo ezikhuthazayo zevidiyo, kunye nokukhutshwa komcimbi wokuphila, kunye -khamera ikhupha ngokukwazi ukuhlawula imicimbi yamashishini kumawaka abantu abasebenzisa intanethi.
Igalelo lomhleli at Ukusasaza Beat kunye ne-AV Beat Magazine
Iinkonzo zee-arhente zakhe, ngaphezu kwekota leminyaka, ziye zanceda i-garner ekuqaleni kwenkqubela kunye nenkampani yokukhula ebonakalayo ebonakalayo, ukuphumela ekufunyeneni okanye kwi-IPO, ngokulinganisa ngokupheleleyo kwi-$ 2.0 Billion.
Ungumcebisi osebenzayo kunye nomcebisi ophezulu kumashishini amaninzi asekwayo kunye nokuqala, i-market analyst, kwaye unamava eminyaka amathathu ekuphuhlisweni kweentengiso, ukubonisana nokuphathwa, ukuhanjiswa kweenkampani, ukuhanjiswa kweenkampani kunye nolwalamano loluntu.
Umfundi ophumelele kwiCalifornia Polytechnic State University (iCal Poly), eSan Luis Obispo; Umnumzana Chan ubhiyozela unyaka wakhe we-13 njengo-Sekela Mongameli we-Fullerton College Foundation kunye nelokufumana iBhaso likaMongameli ngo-2017 kwiNkonzo ebalaseleyo kwiShishini; Kunyaka we-18 njengoSomashishini kwi-Residence kunye nase-mentor kwiZiko lamaShishini amaNcinci kwiCalifornia State University Fullerton kunye nabangenayo. Ukongeza, ulilungu lokuvolontiya le-DECA (i-Delta Epsilon Chi kunye neeklabhu zokuSasaza zeZifundo zaseMelika); umcebisi kwiKholeji yoNjineli weZiko loPhando lweNkunkuma kwiZiko lobuGcisa kunye neZiko loYilo kunye noRhwebo, uCal Poly, uSan Luis Obispo kunye nelungu le-Mongameli oGqibeleleyo kunye neGolide Umbutho. Othandekayo kukhathalelo lweendawo zokugcina abaguli, wayengu-Mongameli weBhodi yeQela loMbutho weNtliziyo; kwaye isisithethi esibonakalayo esiqhelekileyo kwizifundo ezininzi ze-MBA nakwi-Doctorate kwizifundo kwilizwe liphela. Uveze kwaye wapapasha amaphepha angama-30 kwihlabathi liphela, yincwadi-umbhali-zincwadi, ilungu leBhodi yokuHlela uMbutho wabaFoti beMoto kunye neeNjineli zeTV, Umhleli oPhezulu woSasazo lweeMagazini kunye neeVen Beat zeMagazini, uMhleli oPhakamileyo woPhononongo lweTekhnoloji yeKhompyutha, kwaye ungumhleli ohleli enegalelo rhoqo kwi-US nakwiimpapasho zorhwebo zamanye amazwe ngaphezulu kweminyaka engama-30.
Jonga iinkonzo ze-Cognitive Impact kwi-www.cognitiveimpact.com. Curtis ifikeleleka kuyo [imeyile ikhuselwe]; Iofisi: (714) 447-4993
Take 1 Improves Resource Scheduling with Xytech’s MediaPulse - Agasti 6, 2020
IiNkokeli eziManyanisiweyo kunye nezeMfundo ukuxoxa ngefuthe le-COVID-19 kwimfundo Ngexesha lokudibana kweyona nto ibanjwe ziDiscovery Education - Aprili 6, 2020
I-VDX.tv iqalisa iVidiyo yePSA yeDijithali yePSA yokwazisa uluntu malunga ne-COVID-19 - Aprili 2, 2020
10GbE 1GbE 4K Iseva yokudlala ye-4K / UHD Avid Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida Drone ukuhlela eye HEVC ukudityaniswa JMR mveliso Mveliso RAID Umncedisi BuTeknoloji TVU Networks Injini yeVidiyo Ukuveliswa kwevidiyo 2019-07-15
Previous: I-Sasani Studios Yakha i-Its Generation Media Foundation kunye ne-EditShare Workflow Solutions
next: I-2019 -2020 Ifilimu kunye neNgcaciso yeVidiyo (inendima encinci yokufundisa)